“Cross country” Analamanga :: Voahosotra ho tompondaka i Hajanirina sy Nani • AoRaha
“Cross country” Analamanga Voahosotra ho tompondaka i Hajanirina sy Nani
Norombahin’i Hajanirina Andriamparany (Cosfa) sy Nanie Razafindrafara (3FANS) ny anaram-boninahitra, tompondakan’ Analamanga, teo amin’ny hazakazaka lavitr’ezaka “Cross country”, notante-rahina ny faran’ny herinandro lasa teo, teny Soavina.
Herinandro mialoha ny fifaninanam-pirenena hatao any Fianarantsoa, amin’ny sabotsy 16 febroary, ity hetsika nokarakarain’ny Ligin’ Analamanga nahafantarana ireo tompondakany ity. Tao anatin’ny fe-potoana 31’30’’ no namitan’i Hajanirina ny halaviran-dalana 8,400 km tamin’io fifaninanana, raha 38’23’’ kosa no nanaovan’i Nanie Razafindrafara izany.
Teo amin’ny sokajy lehilahy dia nanjazakaza tanteraka ireo atletan’ny Cosfa satria i Hervé Patrick (31’55’’) sy Tsila Tahianjanahary (31’59’’) no nilahatra tao aorian’i Hajanirina. Nifampizarana kosa ny toerana teo amin’ny sokajy vehivavy. Teo amin’ny laharana faharoa kosa no nisy an’i Marthe Ralisinirina avy ao amin’ny 3FB (38’41’’), raha laharana fahatelo kosa i Mbolatiana Ramiandrisoa avy ao amin’ny Cnaps (39’51’’).
Voahosotra ho tompondaka teo amin’ny sokajy Juniors kosa i Clah Jean Raharimino avy ao amin’ny TAF, rehefa nahavita ny halavirana 6,200 km tao anatin’ny fe-potoana 22’30’’, raha i Emma Soalalaonjana-hary avy ao amin’ny Cospn (19’52’’) no voalohany tamin’ireo juniors vehivavy nihazakazaka tamin’ny halavirana 5,200 km. I Jean Michel (16’45’’/5,400 km) sy Faratiana Razafindramaro (13’31’’/2,800 km), izay samy avy ao amin’ny klioban’ny 3FANS, no tonga voalohany tamin’ny sokajy cadet.
Lalaon’ny nosy 2019 :: Hanokana dimanjato tapitrisa ariary ny fanjakana malagasy
Tolona isan-tarika :: Nahavita pao-droa teo amin’ ny Seniors ny Cosfa